Galaxy S10 Lite နဲ့ S10 Plus တို့ Benchmark ဘယ်လောက်ရကြလဲ? | MyTech Myanmar
Galaxy S10 Lite နဲ့ S10 Plus တို့ Benchmark ဘယ်လောက်ရကြလဲ?
Samsung က S Series တွေကို မတ်လမှာ အမြဲတမ်းမိတ်ဆက်နေကျပါ။ ဒီတစ်ခေါက် Galaxy S10 တွေလည်း ၂၀၁၉ ဘာစီလိုနာမှာ ကျင်းပမယ့် MWC ပွဲကျရင် မိတ်ဆက်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ ၃လလောက်ပဲ စောင့်ရတော့မှာပါ။
မထွက်ခင်မှာ ထုံးစံအတိုင်း သတင်းလေးတွေထွက်နေကျဆိုတော့ ဒီတစ်ခေါက်လည်း ထွက်လာတဲ့သတင်းက S10 Series ရဲ့ ဈေးအကြီးဆုံး S10 Plus နဲ့ တန်ဖိုးသင့် S10 Lite တို့ရဲ့ Benchmark ရလဒ်တွေ အကြောင်းပါ။
ဖုန်းရဲ့ မော်ဒယ်လ်နံပါတ် ၂မျိုးကတော့ Lite ဗားရှင်းကို SM-G970 နဲ့ Plus-Size ဗားရှင်းကို SM-G975 ဆိုပြီး နာမည်ပေးထားပါတယ်။ S10 Lite ရဲ့ စမ်းသပ်ထားတဲ့ရလဒ်အတိုင်း 360 x 760 ဆိုတဲ့ Resolution က တွက်ကြည့်ရင် 1080×2280 Pixels ရှိတဲ့ 19:9 Aspect Ratio နဲ့ပါ။
Plus Model အတွက်ကတော့ 412×869 ဆိုတော့ 1440×3040 px ရှိတဲ့ QHD+ Resolution Display ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ Display ကတော့ တော်တော်မိုက်မယ့်ပုံပါပဲ။ ဒါပေမယ့် HTML5 စမ်းသပ်ချက်မှာတော့ S10 Lite ရဲ့ ရမှတ်တွေက ပိုကောင်းနေတေ့ာ စဉ်းစားစရာက ၂ခုလုံးက မထွက်သေးခင် စမ်းသပ်ဆဲအဆင့်မှာ ရှိသေးတဲ့အတွက်လို့ပဲ ကောက်ချက်ချရမှာပါ။
မှန်းထားတာကတော့ လာမယ့် ဘာစီလိုနာမှာကျင်းပမယ့် Mobile World Congress (MWC) ပွဲမတိုင်ခင် ဖေဖော်ဝါရီလမှာပဲ Galaxy Unpacked Event ကျင်းပပြီး မိတ်ဆက်သွားမယ်လို့လည်း ထင်မိပါတယ်။
၁၀နှစ်ပြည့်ရဲ့ အထူးထုတ်မော်ဒယ်ကြီးအကြောင်းကတော့ သတင်းလည်း မကြားမိသေးသလို တော်တော်လည်း လျှို့ဝှက်ထားနိုင်တဲ့အတွက် Leak တွေ တစ်စမှ ထွက်မလာပါစေနဲ့လို့ ဆုတောင်းပါတယ်။ ထွက်လာတဲ့အချိန်မှ အကုန်လုံး အံသြသွားစေလောက်တဲ့ ဒီဇိုင်းကာလာအနေအထားနဲ့ ထွက်လာမယ်လို့ပဲ မှန်းရင်း လာမယ့် ၂လကို လက်ချိုးရေရင်း စောင့်လိုက်ကြတာပေါ့။
Samsung က S Series တှကေို မတျလမှာ အမွဲတမျးမိတျဆကျနကေပြါ။ ဒီတဈခေါကျ Galaxy S10 တှလေညျး ၂၀၁၉ ဘာစီလိုနာမှာ ကငျြးပမယျ့ MWC ပှဲကရြငျ မိတျဆကျလာနိုငျတယျဆိုတော့ ၃လလောကျပဲ စောငျ့ရတော့မှာပါ။
မထှကျခငျမှာ ထုံးစံအတိုငျး သတငျးလေးတှထှေကျနကေဆြိုတော့ ဒီတဈခေါကျလညျး ထှကျလာတဲ့သတငျးက S10 Series ရဲ့ ဈေးအကွီးဆုံး S10 Plus နဲ့ တနျဖိုးသငျ့ S10 Lite တို့ရဲ့ Benchmark ရလဒျတှေ အကွောငျးပါ။
ဖုနျးရဲ့ မျောဒယျလျနံပါတျ ၂မြိုးကတော့ Lite ဗားရှငျးကို SM-G970 နဲ့ Plus-Size ဗားရှငျးကို SM-G975 ဆိုပွီး နာမညျပေးထားပါတယျ။ S10 Lite ရဲ့ စမျးသပျထားတဲ့ရလဒျအတိုငျး 360 x 760 ဆိုတဲ့ Resolution က တှကျကွညျ့ရငျ 1080×2280 Pixels ရှိတဲ့ 19:9 Aspect Ratio နဲ့ပါ။
Plus Model အတှကျကတော့ 412×869 ဆိုတော့ 1440×3040px ရှိတဲ့ QHD+ Resolution Display ဖွဈနိုငျပါတယျ။ Display ကတော့ တျောတျောမိုကျမယျ့ပုံပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ HTML5 စမျးသပျခကျြမှာတော့ S10 Lite ရဲ့ ရမှတျတှကေ ပိုကောငျးနတေေ့ စဉျးစားစရာက ၂ခုလုံးက မထှကျသေးခငျ စမျးသပျဆဲအဆငျ့မှာ ရှိသေးတဲ့အတှကျလို့ပဲ ကောကျခကျြခရြမှာပါ။
မှနျးထားတာကတော့ လာမယျ့ ဘာစီလိုနာမှာကငျြးပမယျ့ Mobile World Congress (MWC) ပှဲမတိုငျခငျ ဖဖေျောဝါရီလမှာပဲ Galaxy Unpacked Event ကငျြးပပွီး မိတျဆကျသှားမယျလို့လညျး ထငျမိပါတယျ။
၁၀နှဈပွညျ့ရဲ့ အထူးထုတျမျောဒယျကွီးအကွောငျးကတော့ သတငျးလညျး မကွားမိသေးသလို တျောတျောလညျး လြှို့ဝှကျထားနိုငျတဲ့အတှကျ Leak တှေ တဈစမှ ထှကျမလာပါစနေဲ့လို့ ဆုတောငျးပါတယျ။ ထှကျလာတဲ့အခြိနျမှ အကုနျလုံး အံသွသှားစလေောကျတဲ့ ဒီဇိုငျးကာလာအနအေထားနဲ့ ထှကျလာမယျလို့ပဲ မှနျးရငျး လာမယျ့ ၂လကို လကျခြိုးရရေငျး စောငျ့လိုကျကွတာပေါ့။
MyTech Myanmar2018-12-24T10:21:02+06:30December 24th, 2018|Uncategorized|